Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » Dalxiiska Kariibiyaanka oo Bilaabay Shabakad Bulsho
Barbados News Breaking • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
CTO oo Daah -furtay Shabakadda Dalxiiska Bulshada
Ururka Dalxiiska ee Kariibiyaanka (CTO) ayaa bilaabay Shabakadda Dalxiiska Bulshada ee Kariibiyaanka (CCTN) si ay u siiso barxad ay ku taageerto horumarka sii socda ee CBT ee Kariibiyaanka. Mas'uuliyiinta horumarinta wax-soo-saarka dalxiiska ee gobolka Kariibiyaanka waxay hadda haystaan ​​kheyraad ay ka soo qaadan karaan marka ay horumarinayaan barnaamijyadooda dalxiiska ee ku saleysan bulshada (CBT).
Shabakaddu waxay bixin doontaa madal si ay u taageerto horumarka socda ee dalxiiska ku salaysan bulshada ee gobolka.
Shabakaddu waxay fududeyn doontaa is -weydaarsiga hababka ugu wanaagsan ee ka dhexeeya dalalka xubnaha ka ah CTO iyo la -hawlgalayaasha horumarinta dalxiiska ee danaynaya.
Waxa kale oo ay gacan ka geysan doontaa aqoonsiga baahiyaha dhisidda awoodda iyo sidoo kale caqabadaha iyo fursadaha horumarinta CBT.
"Dalxiiska ku salaysan bulshada wuxuu bixiyaa fursad lagu soo afjarayo farqiga bulsheed iyo dhaqaale ee bulshooyinka maxalliga ah, wuxuu u oggolaanayaa xubnaha bulshada waddo loo maro hab-nololeedyo waara, waana dariiqa ka-qaybgalka firfircoon iyo awood-siinta dadka maxalliga ah ee dalxiiska," ayay tiri Amanda Charles, khabiirka dalxiiska waara ee CTO. "Shabakadani waxay siisaa waddo xubnaha CTO ay ku wadaagaan aqoonta, kheyraadka, iyo dhaqannada ugu wanaagsan si loo wanaajiyo khibradaha dalxiiska bulshada iyo saameynta dhaqaale."
Hawlaha CCTN waxaa ka mid ah dhiirrigelinta iyo taageeridda istaraatiijiyadaha horumarinta gobolka ee CBT, bixinta talooyinka, iyo ku -talinta waxqabadyada iyo ficillada iyada oo la eegayo kor u qaadista aragtida iyo qiimaha CBT oo ah badeecad dalxiis goboleed, iyo is -dhaafsiga khibradaha dadaallada qaranka iyo kuwa gobolka.